Artemisa - Faa'iidooyinka caafimaad ee weyn | Bezzia
Susana godoy | 18/06/2022 14:00 | Daryeel caafimaad
Sidaan ognahay, waxaa jira dhir badan oo naga caawiya maalin kasta faa'iidooyinkooda weyn. Hagaag, kiiskan kama aan hari doonin markii aan soo sheegnay Artemis. Dabcan, haddii aanad magaceeda ku garanayn, waxa laga yaabaa inay aad u taqaanid haddii Waxaan kuu sheegaynaa in sidoo kale loo yaqaan dacar ama St. John's wort.
Waxaa laga yaabaa inaad hadda hore u ogaatay nooca geedka aan ka hadlayno. Hagaag, waxay leedahay qaar badan faa'iidooyinka caafimaadka waxaad u baahan tahay inaad ogaato Intaa waxaa dheer, dhammaantood waxay dib u noqdaan sannado badan, taas oo ay ugu wacan tahay waxtarkaas aan soo sheegnay. Markaa, ka sii fikiri mayno oo waxaynu ogaan doonnaa waxa ay yihiin wanaaggaas waaweyn.
1 Mugwort waxay kaa caawinaysaa inaad dhimato miisaankaaga
2 Waxay yareysaa xanuunka caadada
3 Waxaad ka tagi doontaa culeyska caloosha
4 waad illoobi doontaa xanuunka
5 Sideen u qaadan karaa geedkan
Mugwort waxay kaa caawinaysaa inaad dhimato miisaankaaga
Hubaal in aad mar walba raadinayso hababka ugu fiican ee aad uga takhalusi karto kilos qaar ka mid ah. Waxa aad hore u ogaatay in aanay arrintu ahayn joojinta cunnada ee ay tahay soo bandhigida cunto caafimaad leh. Sidaa darteed, sida dhamaystirka cuntooyinka ugu muhiimsan ee maalinta, waxaan heli doonaa caawinta weyn ee dhirta Artemisa. Sababtoo ah faa'iidooyinka aadka looga faallooday, tani waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan. Waxay kaa caawinaysaa inaad lumiso miisaanka sababtoo ah waa geed nadiif ah. Waxa la sameeyo taasi waxay noqon doontaa mid ku habboon in la nadiifiyo jirka. Waxaad horeyba u ogtahay in cuntooyinka dufanka leh, aad ka fogaan doonto haynta dareeraha iyo guud ahaan, waxaad dareemi doontaa wax badan.
Waxay yareysaa xanuunka caadada
Haweenka qaba xanuunkaas daran bil kasta waxay ogaan doonaan waxaan ka hadlayno. Sababtoo ah marka laga soo tago xanuunka aad u daran, oo aynaan xitaa garanayn sida loo xidho, had iyo jeer ma helno xal wanaagsan oo lagu dejiyo. Sidaa darteed, haddii aad doorbidayso inaad sharad ku sameyso dawooyinka dabiiciga ah, Artemis ayaa ku jiri doona dhinacaaga. Waxaad ka tagi doontaa colic ee caadada laakiin sidoo kale waa in ay sidoo kale nidaamin doonto. Adigoo aan ilaawin taas sidoo kale, mahadsanid, waxaad yeelan doontaa qulqul badan. Markaa, waxaas oo dhan, waa inaad isku daydaa. Miyaadan u malaynayn?
Waxaad ka tagi doontaa culeyska caloosha
Waxaa jira dhibaatooyin badan oo caloosha ah oo aan haysan karno maalmaha oo dhan. Mid ka mid ah kuwa ugu badan ayaa leh dheefshiidka. Culeyskaas soo muuqda cuntada ka dib ayaa ah tan ugu xanaaqsan. Si la mid ah. gaas urursan ama xitaa dib u soo celin Waxay tilmaamayaan in dheefshiidku uusan raacin tillaabooyinka uu caadi ahaan qaado. Sidaa darteed, si loo caawiyo iyo habka dabiiciga ah, waxay sidoo kale noqon doontaa geedkan waa inaan tixgelinno. Sababtoo ah waxay yaraynaysaa dhammaan calaamadahan iyada oo ay ugu wacan tahay hawlaheeda nadiifinta.
waad illoobi doontaa xanuunka
Inkasta oo aan horay u soo sheegnay xanuunka caadada, hadda waxaan ku soo laabaneynaa xanuunka laakiin waxaan tixraacnaa kala goysyada. Duugista saliid Artemis yar ayaa ku siin doonta gargaarka aad u baahan tahay. sababtoo ah sidoo kale ayaa leh hanti dejineed. Sidaa darteed, waa waqtigii aad naftaada u ogolaan lahayd in lagu qaado xal dabiici ah oo kan oo kale ah si aad u yareyso xanuunkaas xoogga leh ee mararka qaarkood aan kuu ogolaaneynin inaad sii wadato maalin kasta.
Sideen u qaadan karaa geedkan
Ka dib markaad aragto faa'iidooyinka ugu muhiimsan, waxaad la yaabi doontaa sida aad u qaadan karto si aad u bilowdo inaad ogaato faa'iidooyinkaas. Hagaag, aad bay u fududdahay sababtoo ah waxaad haysaa dhowr siyaabood. Dhinac waxaad u qaadan kartaa qaab faleebo gaar ahaan marka ay tahay in la daweeyo xanuunka caadada ee aan soo sheegnay. Laakiin tusaale ahaan, si loo yareeyo xanuunka kala goysyada, waxaad sidoo kale samayn kartaa duugis leh saliid Artemis. Marka laga reebo faleebada iyo saliidda, waxaad ka heli doontaa budada laakiin haddii aad sidaas u isticmaasho, isku day inaadan dhaafin 3 garaam maalin kasta. Si la mid ah, kuma habboona haweenka uurka leh sidoo kale sida aan had iyo jeer niraahno, waxba kuma dhimeyso inaad la xiriirto, la tasho dhakhtarkaaga marka aad xanuuno kale ku qabtid dadka waayeelka ah ama qaado daaweyn kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Caafimaadka » Daryeel caafimaad » Mugwort: faa'iidooyinka caafimaad ee weyn